Wararka - Warshadaha firfircoon - Ganacsiga elektarooniga ah, Habka horumarinta ganacsiga cusub
Bishii Janaayo 22, Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga wuxuu ka hadlay horumarinta suuqa tafaariiqda ee internetka sanadka 2020, isagoo sheegay in sanadkii la soo dhaafay, horumarinta suuqa tafaariiqda ee internetka ay muujisay isbeddel wanaagsan, cabirka suuqyaduna uu gaadhay meel sare oo cusub heer. Sannadka oo dhan ee 2020, astaamaha suuqa tafaariiqda ee Shiinaha waa sida soo socota: isbeddelka qaabkii hore ee ganacsiga ee loo beddelay mid cusub waa la adkeeyay, xawaaraha kor u qaadista isticmaalka lama dhimin; Ganacsiga e-xuduudaha ayaa sii wadaya kobcinta horumarka ganacsiga caalamiga ah; Ganacsiga elektaroonigga ah ee reer miyiga waa la casriyeeyay, horumarka e-ganacsiga miyiga ayaa la sii adkeeyay.
Waxaa lagu soo warramey in sanadka 2020-ka, aaladaha muhiimka ah ee korjoogteynta e-commerce ee Shiinaha ay uruursadeen in ka badan 24 milyan oo iib ah oo toos ah, iibka waxbarashada tooska ah ee internetka ayaa kordhay in ka badan 140% marka la barbardhigo sanadkii hore, iyo la-talinta bukaanka caafimaad ee khadka tooska ah wuxuu kordhay 73.4% sanadkii Sannadka waxaa sii dheer, waxqabadyo ballaaran oo ku saabsan dhiirrigelinta wax soo iibsiga internetka sida "Bandhigga Dukaameysiga Labaad", "618 ″," Double 11 ″ iyo socda "Iibsiga Dabaaldegga ee Xilliga Gu'ga ee Onlineka ah" ayaa dhiirrigeliyay sii-deynta baahida waxayna si weyn u xoojiyeen kobaca suuqa . Isticmaalka cagaarka, caafimaadka, "muuqaalka guriga" iyo "dhaqaalaha guriga" ayaa noqday mid caan ah, iyo koritaanka qalabka jirdhiska, cuntada caafimaadka leh, jeermiska iyo alaabada fayadhowrka, qalabka jikada ee dhammaadka-sare iyo alaabada xayawaanka ayaa dhammaantood dhaafay 30%.
Sida laga soo xigtay tirakoobka kastamka, Shiinaha soo dejinta iyo dhoofinta mugga e-ganacsiga ka gudbaya xuduudaha ayaa gaari doona 1.69 tiriliyan RMB sanadka 2020, kororka 31.1%. Iskaashiga Shiinaha ee 22 waddan ee ganacsiga e-ganacsiga ee loo yaqaan 'Silk Road e-commerce' ayaa sii qoto dheeraaday, isla markaana waxaa la dedejiyay hirgelinta natiijooyinka iskaashiga labada dhinac. 46 aag ganacsi oo cusub oo xuduudaha iskutallaabta ah ayaa lagu daray, iyo "9710 ″ iyo" 9810 ″ noocyada ganacsiga e-commerce B2B dhoofinta moodooyinka ayaa lagu daray si loo fududeeyo nadiifinta kastamka.
Marka laga hadlayo e-commerce e-miyiga, iibka tafaariiqda ee miyiga wuxuu gaarey 1.79 trillion yuan sanadka 2020, ilaa 8.9% sanadkii sanadkii. Ganacsiga E-commerce wuxuu dardar galiyay warshadaynta iyo horumarinta dhijitaalka ah ee awood u siinaya beeraha, iyo taxane ah wax soo saarka beeraha ee la jaanqaaday suuqa ganacsiga e-commerce ayaa sii wadaya inuu sifiican u iibsado, isagoo siinaya xoojin xoog leh soo nooleynta reer miyiga iyo yareynta saboolnimada. Sida laga soo xigtay xogta ay soo saartay Xafiiska Qaranka ee Tirakoobka, iibinta tafaariiqda Shiinaha ee sanadka 2020 waxay gaari doontaa 11.76 trillion yuan, ilaa 10.9% sanadkii, iyo tafaariiqda tafaariiqda internetka ee alaabada jirka waxay gaari doontaa 9.76 trillion yuan, ilaa 14.8% sanadkii sanadka , oo ka dhigan ku dhowaad rubuc ka mid ah wadarta iibka tafaariiqda ee alaabada macaamiisha.
Xogta ayaa muujineysa in tafaariiqda internetka ay ka ciyaareyso door muhiim ah kobcinta isticmaalka, xasilinta ganacsiga shisheeyaha, ballaarinta shaqada iyo hubinta nolosha dadka, ku biirinta muhiimadda cusub qaab cusub oo horumar ah kaas oo wareegga gudaha uu yahay jirka ugu weyn iyo wareegyada gudaha iyo caalamiga ah. way is xoojinayaan